नेपाल डिभिजन टुको शीर्ष दुईमा, अब के ? | Ratopati
नेपाल डिभिजन टुको शीर्ष दुईमा, अब के ?
काठमाडौँ । रोमाञ्चक खेलमा क्यानाडालाई पराजित गरेपछि नेपालले आइसीसी विश्व क्रिकेट लिगको डिभिजन टुको शीर्ष दुईमा स्थान पक्का गरेको छ ।
यस जीतको अर्थ के ? अब के हुनेछ ? यो प्रश्न आम पाठकमा हुन सक्छ ।
४ मार्चदेखि २५ मार्चसम्म जिम्बाबेमा हुने आईसीसी विश्वकप छनोटमा १० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
सेप्टेम्बर २०१७ भित्र वरियतामा शीर्ष १२ टोलीमध्ये पुछारमा रहेका चार टोलीले विश्वकप छनोट खेल्नुपर्ने नियम आईसीसीले बनाएको थियो ।
वरियताका शीर्ष ८ टोलीले मात्रै विश्वकपमा सोझै प्रवेश पाए । त्यसैले उक्त मितिमा नवौंदेखि १२ औं स्थानमा रहेका वेस्ट इन्डिज अफगानिस्तान, आयरल्यान्ड र जिम्बाबेले विश्वकप छनोटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट च्याम्पियनसिपबाट छनोट भएका चार टिम नेदरल्याण्ड, हङकङ, पिएनजी र स्कटल्यान्डले पनि प्रतियोगिता खेल्नेछन् ।
च्याम्पियनसिपबाट रेलिगेसनमा परेका चार टोली केन्या,युएई, नेपाल र नामिबियाले अहिले डिभिजन ३ बाट बढुवा भएका क्यानेडा र ओमानसँगै डिभिजन–२ खेलिरहेका छन् । डिभिजन–२ को शीर्ष स्थानमा रहने २ टोली विश्वकप छनोटमा छानिने प्रावधान अनुरुप नेपाल र युएईले छनोटमा आ–आफ्नो स्थान पक्का गरेका हुन् ।
यी दुई टोलीमध्ये डिभिजन २ को विजेता र उपविजेताको छिनोफानो हुन बाँकी छ । त्यसका लागि फाइनल खेल हुनेछ । तर, जसले उपाधि जितेपनि दुबै टोली विश्वकप छनोटमा पुगिसकेका छन् ।
छनोट प्रतियोगितामा १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेपनि केवल २ टिममात्रै विश्वकपका लागि छानिनेछन् ।
बाँकी ८ टिम यसअघि नै छनोट भइसकेकाले सन् २०१९ मा इङल्यान्ड र वेल्समा संयुक्त रुपमा आयोजना हुने विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीको कुल संख्या १० हुनेछ ।